सांसद गोकुल बाँस्कोटाले दिए ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौती (भिडियो रिपोर्टसहित) – Himalaya Television
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले दिए ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौती (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७७ चैत २३ गते १६:०८
२३ चैत २०७७ काठमाडौं । नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली समूहका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौति दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएकालाई विश्वासको मत फिर्ता लिन भन्नुभएको हो । सरकार कामचलाउ भएको भन्ने टिप्पणीमा धारणा राख्दै उहाँले समर्थन फिर्ता भएपछि नयाँ ढंगले राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले समर्थन फिर्ता नलिएर “आफै अड्काउने,आफै पड्काउने” काम राजनीतिक दलहरुबाट भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “कसरी हुन्छ कामचलाउ सरकार ? सरकार गठन भएको जगभित्र के छ ? समर्थन आफु गर्ने, समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउनका लागि कुनै एजेण्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने काम चलाउ भयो ? कसरी काम चलाउ भयो ? विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो हिजो ? फिर्ता लिनोस् । अर्को विषय शुरुवात हुन्छ होला नि त । बन्दी बनाएर हामी जान सक्तैनौ । आफै अड्काउने आफै पट्काउने ? के गर्ने हो गर्नुहोस् । राजनीतिको मैदान खुल्ला छ । ”
वर्तमान सरकार कामचलाउ नभएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो । उहाँले विगतमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको समयमा काम चलाउ सरकारको मन्त्री मण्डलको झुण्डमा “लम्पट” भएर बसेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
कुनै एउटा दलले सत्ता कब्जा गरेको अवस्था नभई चेक एण्ड व्यालेन्समा सरकार चलेको भन्दै उहाँले जनताको अभिमत लिनका लागि जनताबीच जान प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सही भएको दाबी गर्नुभयो । जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक नहुने भन्दै उहाँले अभिमतबाटै लोकप्रियता नाप्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “जनताको बीचमा जानु प्रतिगमन हुन्छ भने अग्रगमन के हुन्छ ? द्वन्द्वकालमा निरंकुश राजासँग मिलेर शाही साम्यवाद ल्याउनका लागि गरेको वार्ता र छलफल चाहिँ अग्रगमन हो ? प्रतिगमन यस्तै हुन्छ भने, विकास निर्माण, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताको बीचमा जाने कुरामा प्रतिगमन देखिन्छ भने यस्तो प्रतिगमन, विकासको प्रतिगमन, निर्माणको प्रतिगमन, जनताको बीचमा अभिमत लिन जाने प्रतिगमन यो देशका बारम्बार भइरहन्छ किनभने यहाँ लोकतन्त्र छ । मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने हो भने ताजा जनादेशको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो । ”
उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ इंकित गदै चुनावदेखि डराउनेहरुले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन भनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “चुनाव देख्नासाथ फोविया हुने साथीहरुले प्रतिगमन भो भन्ने ? त्यसो भए चुनावै गराउनु छैन भने, भोट माग्न नजाउँ, चुनाव नगराउँ, कस्तो लोकतन्त्र हो नयाँ बहस गरौं । क्रान्तिकारी लफ्फाजी भित्र कम्फर्टेबल मात्रै हो भने भन्नु केही छैन । ”
उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि नेपालको राजनीतिमा मात्रै केन्द्रीकृत भएको र विकास निर्माण, जनताको सेवा, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वभिमानका विषय सरकारको प्राथमिकता र राष्ट्रिय एजेण्डामा पर्ने नगरेको दाबी गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले विकास निर्माण लगायत जनताको खुसीका पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उहाँले जनताको खुसी नचाहने दलहरुले के चाहन्छन् ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । वस्तुगत रुपमा नभई विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटीले राजनीतिको सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यही कुरालाई उडाउन खोजिन्छ भने, यसप्रति पनि खुसी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु के चाहन्छन् ? उनको विकासको एजेण्डा के हो ? उनको राजनीतिक मुद्दा के हुन् ? एजेण्डाविहीन नेतृत्वले मुलुकका निम्ति के योगदान गर्न सक्छ ?”
उहाँले सरकारले गरेका विकास निर्माण लगायत राम्रा कामहरु नदेख्नेलाई “कानमा रुवा राख्न र आँखामा साउने चश्मा लगाउन” सुझाव दिनुभयभो ।
उहाँले भन्नुभयो “१ सय ६५ वटा बाटा बनाउने भयौं । के भनेर चुनावमा जान्छौं हामी ? के भनेर भोट मागेका थियौ हामीले ? आफ्नो क्षेत्रमा के कुरा गरेका थियौं ? यसमा पनि निराशा छ भने दुःखी आत्माहरुप्रति म खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु । मृत सपनाहरु बोकेर आशावादको नेतृत्व गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय । कसैकसैलाई यस्तो हुन्छ । विध्वंश नै विकास देख्नेहरु । तर विकासको पनि एजेण्डा देख्ने साथीहरुमा पनि विचित्र त के लागेको छ भने त्यही बोलीमा लोली मिलाएर केही पनि भएन भन्नुहुन्छ । धरहरा बनेन ? केही पनि देख्न हेर्न सुन्न सकिन्न भने एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ । कानमा रुवा राख्ने, आँखामा साउने चश्मा लगाउने । ”
गोकुल बाँस्कोटा सरकार सांसद